Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Kingley Coman Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Aan Laheyn
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubada cagta oo ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; "Roodhiga Tull". Our Kingsley Coman Childhood Story Sheeko iyo Wada-xariifnimo Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la-arki karo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awoodiisa degdegga ah, laakiin qaar ka mid ah tixgelin nooga ah Kingsley Coman's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Kingley Coman Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Hore iyo ballanqaad
Kingsley Coman waxa uu ku dhashay maalinta 13th ee June 1996 ee waaxda Seine-et-Marne, Paris, France. Waxa uu ku dhashay hooyo Faransiis ah iyo aabihiis, Christian Coman oo ka soo jeeda Guadeloupe, taas oo ah asal u eg Thierry Henry, Claude Makelele, Lilian Thuram iyo Frank Leboeuf. Kingsley wuxuu ahaa taageere Thierry Henry Taas oo ujeedkeeduna ahaa inuu dhiirogeliyo kubadda cagta si dhab ah ilmo ahaan.
Kingsley wuxuu bilaabay xirfadiisa dhallinyaradiisa markii uu jiray lix sano, isagoo ku biiray US Sénart-Moissy ee 2002 ka hor inta uusan ku biirin Paris Saint-Germain ee 2004.
Sida aabaheed uu ku dhejiyo, "Kingsley wuxuu ahaa ilmo oo qayliyay ka dib cayaartii iyo guuldaradii lumay. Waxaan xusuustaa tartanka kubada cagta ee Lille. Kooxdiisa ayaa goolal ku dhalisay semi-finalka, taasoo keentay 1-0. Isla markiiba, wuxuu bilaabay inuu ooyo. Little Kingsley ayaa goolka ku dhaliyay goolkiisii, waxaana dib ugu soo celiyay bartamihii bartamihii isdaba marinta, waxaana uu bilaabay bilowgii ciyaarta. Ciyaartii saaxiibtinimo ee kubada u soo celisay isaga iyo 'King' ayaa goolka guusha udhaliyay kooxda ka soo horjeeda. Tani waxay aheyd sanadkiisii ​​ugu horeeyay ee PSG. Maanta, qaylin maahan kiiska. Marka uu lumiyo kulan muhim ah, saaxiibkiisa iyo xaaskiisa ayaa sheegay in uusan qofna la hadlin ugu yaraan hal maalin. "
Kingsley wuxuu ku koray kooxda PSG waxaana loo arkaa ciyaaryahanka ugu da'da yar uguna balanqaaday PSG. Markii uu da'diisu ahayd 10, wuxuu horay u ciyaaray xagiisa 14 sababtoo ah awooddiisii ​​gaarka ahayd. Kingsley mar uun wax yar ayuu u muuqday sannadihii uu ku soo barbaaray PSG.
Coman ayaa kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay PSG isagoo ku biiray 17 Febraayo 2013. Aragtida ayaa ka dhigtay ciyaaryahanka ugu da'da yar taariikhda PSG taariikhda 16 sano, sideed bilood iyo afar maalmood. Coman ayaa Juventus ku biiray 2014 dhamaadkii heshiiskii uu kula joogay, isagoo ku guuleystay Serie A iyo Coppa Italia xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee Talyaaniga. Bishii Agoosto 2015, wuxuu amaah ugu biiray Bayern Munich, isagoo ku guuleystay labo jeer xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Kingley Coman Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Xiriirka
Waxaa jira hadal ah in; "Ragga dhabta ah ma jecla gabdhaha ugu quruxda badan, waxay jecel yihiin gabadha ka dhigi karta adduunka ugu quruxda badan." Koman, wuxuu ku dhex yaal xiriir qurux badan oo qurux badan oo quruxdiisa ka dhigaya. Habka Faransiiska Sephora Goignan wuxuu leeyahay ilmo isaga.
Beautiful Sephora Goignan waxaa si weyn u yaqaan jilayaasha iyada taageereysa iyada oo aan taageero u ah ninkeeda sida loo arkay sawirka hoose. Waxay u egtahay mid aad u qurux badan oo malaa'igta ah oo karti u leh samaynta nin wuxuu qabaa dhadhan badan oo caloosha ah.
Sephora Goignan ayaa mas'uul ka ah inay xitaa qaadato waqti ay ku samayso shaqadeeda Kinsley oo ah macnaheedu yahay adduunka isaga.
Inkastoo jaceylka, dad badan ayaa waydiistay sababta uu Coman u waday xannibaadda nooca gabadha uu leeyahay. Xaqiiqda waa la sheegi karaa. Xiriirkooda waxay soo baxeen bishii June 2017 kaddib markii Kingsley ay weerartay. Waxaan ku siin doonaa burbur.
Kingsley ayaa markii hore lagu ganaaxay £ 4,390 weerarkii Sephora Goignan kaas oo ka tagay iyada oo aan awoodin in uu shaqeeyo siddeed maalmood. Coman, markii la waydiiyay, ayaa sheegatay inuu lumiyay xusuustiisa ka dib markii saaxiibkiisii ​​hore ee sawirkiisa ku soo qoray sawirkiisii ​​Instagram isaga oo aan ogolaanshihiisa haysan. Halkii uu ka qeybgali lahaa tababarka, wuxuu todobaadyo ku xirnaa maxkamad Faransiis ah ka dib markii uu qirtay dembiga qoyska. Garabka ayaa aqbalay eedeymaha, laakiin wuxuu diidey inuu sameeyo bayaan kaddib markii uu ka soo muuqday maxkamad. Coman ayaa ka dib markii ay Bayern Munich ku ciqaabtay weerarkii uu ka dambeeyay.
Kingley Coman Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Xaqiiqooyinka Qofka
Kingsley Coman wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda ee shakhsiyadiisa.
Dariiqooyinka Kingsley Coman: La qabsasho, awood u leh inay si dhakhso ah wax u bartaan iyo isweydaarsadaan fikradaha Kingsley Coman waa magac ismaamul ah sida kor loo eego.
Korneelyada Coman ee Gacanta: Mararka qaarkood wuxuu dareemaa cabsi taasoo keeni karta rabshada guriga. Taas oo kale, wuxuu noqon karaa mid aan habooneyn oo aan sax ahayn.
Maxaa ka soo jeeda Kingsley Coman: Sameynta safar gaaban oo ku saabsan magaalada, muusikada, akhrinta nooc kasta oo joornaalo ah, iyo inaad la hadasho saaxiibada kaliya.
Maxaa ka soo jeeda Kingsley Coman: Kaligaa noqoshada, xakameynaya, ku celcelinta hawlo tababar oo qariib ah iyo caadiyan.
Soo koobid, Coman waxay u taagan tahay laba shakhsiyadood oo kala duwan, kuwaas oo aad si dhib yar u ogaan doonto cidda aad la kulmi doonto. Waxa uu u dhaqmi lahaa bulsho, isgaadhsiin iyo diyaar u yahay madadaalo. Coman si lama filaan ah ayuu u kici karaa marka aad filanayso. Dad badan ayaa sheegay in saaxiibkiisa Renato Sanchez uu fahamsan yahay inta badan.
Kingley Coman Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Qandhada Timaha
Coming Kingsley Coman mar horey u lahaa habeen xun - labadaba garoonka dhexdiisa iyo madaxiisa. Drama-ka ayaa bilaabay markii uu xiddiga Faransiiska ahaa inuu u dhaqaaqay kooxda ka dhisan Bundesliga lugta hore ee semi-finalka Champions League ee ay la leeyihiin Atletico Madrid, iyadoo Atletico ay badisay waad ku mahadsan tahay qaladkiisa.
Laakiin qeybtii hore ee ciyaarta goolka la iska dhaliyey ee uu ka dhaliyay kooxdiisii, hal shay oo kale ayaa soo jiitay indhaha taageerayaasha daawashada ciyaarta ciyaarta: Waxay ahayd timirta jilicsan ee Coman ee hoos ku sawiran.
Asal ahaan, sida aad ka arki karto sawirka kore, Coman ayaa go'aansaday inuu ka hor tago kumanaan daawadeyaal ah iyo malaayiin daawadayaal muujinaya timaha rifaha dhinaca midigtiisa. Ka dib markii ay ciyaarta ku dhamaatay, taageerayaashu waxay geysteen dembigooda timahooda. Tusaalaha tweets waxaa lagu arkay hoos.
Dabcan, sida aad u qiyaasi kartid, taageerayaasha ayaa si deg deg ah u dareeraya timaha oo waxay ahaayeen kuwo qurux badan oo aan ku faraxsaneyn iyaga oo ku eedeeyay inay lumiyeen. Inkasta oo dhammaan weerarrada timahooda, Kingsley marnaba wax hadal ah kuma laheyn tuugadiisa. Timaha ayaa wali ah sida wakhti qorista.
Kingley Coman Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -cabsi la'aan
Coman kama xishoodo si uu u muujiyo ra'yigiisa. Waqtiga uu ku soo laabanayo waqtigiisii ​​uu ka garab ciyaari lahaa Zlatan Ibrahimovic PSG, Coman ayaa ka yiri Swede: "Xiriirka aan la leeyahay Ibrahimovic wuxuu ahaan jiray dhexdhexaad. Ma aha nooca ciyaaryahan si uu ula xiriiro ciyaartoy da 'yarta ah, islamarkaana talo siiya. Waxa uu kaliya daryeelayaa naftiisa. "
Si kastaba ha ahaatee, Coman wuu ka ammaan badan yahay Pep Guardiola: "Waa tababaraha ugu fiican adduunka, feker ahaanteyda. Waxaan si fiican u horumariyay Pep, waan hayaaa a badan ciyaarta "ayuu hadalkiisa ku daray.
Kingley Coman Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Iskaashiga Costa
Coman iyo Douglas Costa ayaa isku darsaday saameyn weyn tan iyo markii ay ku kulmeen FC Bayern Munich. Dhibaatooyinka Arjen Robben iyo Franck Ribery inkastoo uu beeniyay in kooxda Allianz Arena ay ku kalsoon tahay "Dhaawac" ay ku dheehan tahay, qaab ciyaareedka Costa iyo Coman ayaa si dhaqso ah u arkay Bayern taageerayaasheeda 'Baaritaanka CoCo'.
Kingley Coman Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Shakhsiyadda Kubadda Cagta
Inta badan waxaa loo arkaa mid ka mid ah ciyaartoyda da 'yar ee mustaqbalka leh ee jiilkiisa, Coman waa mid deg deg ah oo tayo leh, farsamo ahaan iyo farsamo gacanta leh, oo leh farsamooyin fiican, aragtida, xawaaraha iyo xataa dardargelinta. Kingsley ayaa awood u leh inuu ka ciyaaro labada dhinac ama xitaa bartamaha, sida ciyaaryahan khadka dhexe ah ama weeraryahan ahaan.
Xitaa waxaad tahay dabiici xaq u leh, booskiisa uu doorbidan yahay bidix, taas oo u ogolaaneysa inuu garaaco mid ka mid ah xaaladaha halista ah, ka gooyo bartamaha cagtiisa midig, iyo inuu ku garaaco goolka, abuuro fursado asxaabta, ama samaynta weerarka ayaa u socda goobta. Sanadkan 2015, Don Balón oo loo yaqaan 'Coman' oo ka mid ah 101 ciyaartoyda da'yarta ugu fiican adduunka
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin inaad akhrisid cinwaankayaga Kingsley Coman Childhood Story plus iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Aymeric Laporte Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography'